I-Minimalist 2Bed Apt-Simply Luxurious Living@Nimman
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguGolf
Ukuhlala nje okutofotofo kwigumbi elibanzi nelitofotofo. Yonwabela imiboniso bhanyabhanya oyithandayo kwi-HUGE 60” TV. Jonga ukutshona kwelanga kwintaba yeSuthep ukusuka kwigumbi lakho lokuhlala labucala ngaphambi kokuphonononga ubomi bobusuku be-chic Nimman.
Ukufumana okunqabileyo kweyunithi yekona ye-41 m2 kwi-6th fl ikunika indawo eyongezelelweyo kunye nentuthuzelo. Igumbi lisanda kuphuculwa kwiMinimalist efashisayo. Ibhedi yesofa inganceda iindwendwe ezi-2 ezongezelelweyo xa uceliwe. Iindwendwe zinokufikelela kwidama lokuqubha kunye nokomelela. Indawo entle enemizuzu embalwa yokuhamba ukuya eNimman/Maya enye.
Isakhiwo esinesitayile esincinci sikumgangatho we-6 sibonelela ngeembono ezingavalwanga ukusuka kwibalcony kunye negumbi lokulala. Igumbi lokulala linempahla yokunxiba, idesika yokusebenza kunye nebhedi elingana noKumkanikazi. Ifakwe ngokupheleleyo ngokufikelela kwi-wifi, i-60” 4K ye-Ultra HD Smart TV ye-LED kwigumbi lokuhlala. Isikhenkcisi, i-oven microwave, i-cutlery, isitya, iimbiza kunye neepani ekhitshini. Isixhobo sokomisa iinwele, i-ayina kunye nebhodi yoku-ayina nazo ziya kubonelelwa.
Wamkelekile kwabo banomdla kwirenti yenyanga. Eli gumbi lixhotyiswe kakuhle libanzi kwaye likulungele ukuhlala ixesha elide.
Qaphela: Iindleko zamanzi nombane azifakwanga kwirenti yenyanga. Iindleko zokurenta ixesha elide ziyaxoxisana. Nceda uqhagamshelane nathi ukuze ufumane eyona nkonzo.
4.98 ·Izimvo eziyi-60
I-Nimman (igama elifutshane lendawo) okanye i-Nimmanhaeminda (imephu kagoogle) yaziwa kakhulu phakathi kolutsha lwasekhaya kuba ikufuphi neYunivesithi yaseChiang Mai. Kananjalo abantu abaninzi bayakuthanda ukonwabela ukutya okuhlukeneyo, ukuphumla kwe-spa kunye nokuhlala kude kube sebusuku.
Umbuki zindwendwe ngu- Golf
Le ndlu inenkqubo yokuzijonga, ngoko uninzi lonxibelelwano luya kwenziwa kwi-intanethi nge-airbnb. Ngamanye amaxesha, ndiya kudibana kwaye ndikubulise.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Mueang Chiang Mai District